Sida loo ka Phone HTC ama Tablet saar Apps
> Resource > Android > Sida loo ka Phone HTC ama Tablet saar Apps
Waxaan si guul ah kusoo rujin aan Cajiib ah oo isticmaalaya Unrevoked. Sidee ayaan ku saabsan tirka qaar ka mid ah barnaamijyadooda HTC pre-ku rakiban?
Si aad u soo saarto barnaamijyadooda ka phone HTC ama kiniin ah, waxaad caawimaad ka qalab app saarista ah weydiin kartaa, sida Wondershare MobileGo for Android (Windows) ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac) . Hadda, uma baahnid inaad u leeyihiin in ay wakhti badan ku qaataa in ay ka saareen Chine ee HTC qalab ee shaashadda yar oo mid mid. Halkii, awooddo ka kaxayntu ay barnaamijyadooda la rabin, oo ay ku jirto barnaamijyadooda preinstalled on rujin HTC Android phone ama kiniin ah, ka PC ka muuqan aad.
Download version maxkamad lacag la'aan ah si ay isugu dayaan saareen barnaamijyadooda ka kiniin HTC Android ama telefoonka.
Fiiro gaar ah: Qalabkani waxa uu ka saarida app - Wondershare MobileGo for Android taageertaa barnaamijyadooda la tirtiro ka HTC Mid ka mid ah X, HTC ugaar, HTC dareenka, iwm Fiiri halkan taageero dheeraad ah HTC Android phone ama miisaska .
Full Hage ku saabsan sida loo tirtiri barnaamijyadooda telefoonka HTC ama kiniin
Fiiri 2 tallaabo hoos ku saabsan sida loo tirtiri barnaamijyadooda bixi iyo barnaamijyadooda preinstalled (on rujin phone Android ama kiniin) la Wondershare MobileGo for Android (dadka isticmaala Windows). Users Mac samayn kartaa hagaha la mid ah in ay tirtirto barnaamijyadooda ka phone HTC ama kiniin la version Mac ah.
Ku rakib oo ay maamulaan MobileGo for Android kombuutarka. Markaas, aad arki doonaa suuqa kala hoose.
Tallaabada 1. Connect HTC telefoonka ama kiniin in kombuutarka
Sida shaashadda ayaa muujinaysa kor ku xusan, in aad kombuutarka via Wi-Fi ama cable USB ku xidhi kartaa HTC telefoonka ama kiniin. MobileGo for Android Aqoonsan doonaa HTC telefoonka ama miiska mar, ka dibna waxa ay u muujiyaan in uu furmo suuqa hoose.
Tallaabada 2. Ka saar barnaamijyadooda ka phone HTC ama kiniin
Tiirka bidix, guji "Apps" u muujiyo suuqa kala app. Raadi iyo sax Chine in aad ku socoto in meesha laga saaro. Haddii aad HTC telefoonka ama miiska habaysan, aad xitaa ka saari karaan barnaamijyadooda preinstalled telefoonka HTC ama kiniin.
Markaas, guji "uninstall". Marka qoraal ah soo booda, aad weydiinaya in aad rabto in aad uninstall ee Chine soo xulay ama aan, waa in aad ku dhufo "Haa". Markaas, wuu xusuusan waayay inuu barkinta aad HTC telefoonka ama kiniin ah ka hor habka app saarista ay ka badan tahay.
Chine takhalusid ka phone HTC ama kiniin ah waxaa loo sameeyaa! Waa degdeg ah oo sahlan in ay tirtirto barnaamijyadooda telefoonka HTC iyo kiniin ka PC, marka aad hesho gargaarka ee MobileGo for Android. Ka dib markii uninstallation, waxaad kala soo bixi kartaa oo dajiyaan barnaamijyadooda aad jeceshahay, music, videos, iwm si aad HTC telefoonka ama kiniin.
Download MobileGo for Android in ay ogaadaan sida ay u soo saarto barnaamijyadooda ka qalab HTC.
Sidee si ay u gudbiyaan SMS ka Phones Android inay PC
Read idin hor gala Samsung Recovery Mode
Android 5.0 hurdiga ah Data Recovery - Ladnaansho fariimaha qoraalka, Xiriirada iyo Photos
Recovery doonayay oo HTC: Ladnaansho tirtiray Photos & Videos ka doonayay oo HTC
Sidee si ay u gudbiyaan Spotify Music Google Music Library
LG Data Recovery: Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga Laptop LG